ドクター・ササの歴史 ーミャンマー地方在住の友人からー - みんがらネットワーク　Mingalar Network
春の革命2021 · 2021/03/10
そのドクター・ササのこれまでの道のりは、彼の慈善団体Health & Hopeにも書かれていますが、より長いストーリーがミャンマー語でシェアされています。
“The greatest gift we can give to the younger generation is education. They will be able to do so many things. Just watch – we will change their story.”　（若い世代への一番の贈り物は教育である。彼らはたくさんのことをできるようになるだろう。見ていてほしい。私たちは彼らのストーリーを変える）
History of Dr.SaSa
ရန်ကုန်ပြန်ခေတ်ပညာတတ်ကြီးဆိုတော့ရွာကလူတွေကစာသင်ခိုင်းတယ်။လိုင်းလင်းပီမှာလုပ်အားပေးဆရာအဖြစ်နှစ်နှစ်စာသင်ပေးတယ်။ရွာမှာနေထိုင်ရင်းဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရွာကလူတွေအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အလွယ်တကူသေဆုံးနေကြရတာကိုသူသတိထားမိလာတယ်.. ။သူစာသင်ပေးနေတဲ့ကလေးငယ်သုံးယောက်ဝမ်းလျှော၊ဝမ်းပျက်ရောဂါနဲ့သေဆုံးသွားခဲ့တော့သူနာကျင်တတ်လာတယ်.. သူ့ဆွေမျိုးတစ်ယောက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင်းသေဆုံးရတဲ့နောက်မှာတော့... ဒီဒေသမှာဆရာဝန်လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်လာတယ်... အစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိတာ၊ရွာသူရွာသားတွေကျန်းမာရေးဗဟုသုတမရှိတာကိုစဉ်းစားမိပြီးကိုယ်တိုင်ပဲဆေးပညာကိုလေ့လာသင်ယူဖြန့်ဝေမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်..
ကောလိပ်ကျောင်းပေါင်း၃၃ကျောင်းကိုလျှောက်ပေမယ့်မရခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးတော့ကောလိပ်တစ်ခုမှာဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး။ပြီးဆုံးတော့ဆေးကျောင်းလျှောက်ဖို့အမှတ်မှီခဲ့တယ်.. နောက်တော့Prospect Burma ကျောင်းနဲ့သူဆက်သွယ်မိတယ်.
Prospect Burma ကျောင်းဆိုတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရံပုံငွေတစ်စိတ်တစ်ဒေသနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ကျောင်းပါ။မြန်မာပြည်ကရောက်လာကြတဲ့ဒုက္ခသည်အမျိုးမျိုးကိုအင်္ဂလိပ်စာ၊ကွန်ပျူတာစတဲ့လိုအပ်တာတွေအခမဲ့သင်ကြားပေးပါတယ်။လမ်းစရိတ်နဲ့စာအုပ်စာတမ်း၊စာရေးကိရိယာတွေနဲ့သင်တန်းအမျိုးမျိုးအတွက်schorshipတွေလဲပေးပါတယ်။
最終的に、Prospect Burmaはササに奨学金を支給することを決定した。Prospect Burmaも、学費が高いLondonまでは支援できない。人口が300万人しかいないアルメニアの医科大学に1年通うための学費だけ支給できた。生活費や他の経費は、彼が自分で稼がなければならなかった。試験に落ちたら支給は打ち切りにすることを約束しなければならなかった。
နောက်ဆုံးတော့လည်းProspect Burma ကဆာဆာကိုထောက်ပံ့ကြေးပေးမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်.. (Prospect Burma ကလည်းကျောင်းစရိတ်ကြီးတဲ့London မှာတော့မထောက်ပံ့နိုင်ဘူးလေ... လူဦးရေ၃သန်းလောက်သာရှိတဲ့အာမေးနီးယားနိုင်ငံလေးမှာဆေးပညာပထမနှစ်တက်ဖို့ကျောင်းစရိတ်လောက်ပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရှာတယ်။စားဖို့နေဖို့အခြားစရိတ်တွေတော့ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဖြေရှင်းပေါ့။စားမေးပွဲကြရင်လည်းထပ်မပေးဘူးပေါ့ဆိုတဲ့ကတိတွေနဲ့ပဲကျောင်းတက်ခဲ့ရတယ်..
ဘာ့ကြောင့်ဆိုမနေ့ကမှသူ့ရွာချင်းတောင်ကရောက်လာတဲ့ "ရွာမှာရေရှားနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊သောက်ရေသန့်ရဖို့ဟိုးအဝေးကြီးကိုတောင်တက်တောင်ဆင်းနဲ့သက်စွန့်ဆံဖျားသွားခပ်ကြရကြောင်း" ရေးထားတဲ့စာကိုစားပွဲပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရတော့သူ့လက်မှာပူပူနွေးနွေးကိုင်လာခဲ့တဲ့ဒေါ်လာငါးထောင်ကိုလည်းသူ့ရွာနဲ့ရွာနီးကပ်ရွာတွေအတွက်ရေလှောင်ကန်ရေပိုက်သွယ်ရာမှာသုံးဖို့ပေးပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။သူ့ရွာကိုမမေ့ဘူးပေါ့...
2008年、6年生のときに、イギリスのチャールズ皇太子に会った。場所はロンドンのAbbey Gardens, Westminsterだ。皇太子に会ったとき、挨拶の仕方がわからずどうすればいいかササは考えていた。幸運なことに、階段の上から降りてくるチャールズ皇太子が、階段の中ほどで、「カラフルな服装でがっしりと大柄な若者は誰か」と言った。そして彼の近くに来て、彼の二の腕をつかんだのだ。なので、作法を知らないササも落ち着くことができた。
သူဆဌမနှစ်ဆေးကျောင်းသားဘ၀၂၀၀၈ခုနှစ်မှာဗြိတိသျှနန်းလျာချားလ်မင်းသားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတယ်။နေရာကLondon မြို့ပေါ်ကAbbey Gardens, Westministerဆိုတဲ့အဓိကနေရာကြီးမှာပေါ့.. တော်ဝင်မင်းသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါလိုက်နာရမယ့်နှုတ်ဆက်ပုံတွေကိုမလုပ်တတ်လို့တွေးပူနေတဲ့ဆာဆာကံကောင်းချင်တော့စံအိမ်တောင်အပေါ်ထပ်လှေကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ချားလ်မင်းသားကလှေခါးတစ်ဝက်ကနေပဲဟိုရောင်စုံဝတ်စုံနဲ့ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းလူငယ်ကဘယ်သူလဲဆိုပြီးပြောဆိုပြီးသူနားရောက်လာပြီးသူ့လက်မောင်းကိုလှမ်းကိုင်လိုက်တော့အရိုအသေမပြုတတ်တဲ့ဆာဆာလည်းချောလဲရောထိုင်လုပ်ရတာပေါ့..
ဆာဆာရဲ့ချင်းဝတ်စုံကို "colorful and beautiful" လို့၅ကြိမ်လောက်ပြောတဲ့ချားလ်မင်းသားကိုဆာဆာကချင်းပြည်နယ်အဲ့နှစ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့နှစ်၅၀မှတစ်ခါပွင့်တဲ့ဝါသီးပွင့်ချိန်မှာမှကြွက်တွေကြောင့်အငတ်ဘေးရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြခွင့်ရခဲ့တယ်...
၂၀၀၉ခုနှစ်မှာအာမေးနီးယားတကသိုလ်ကနေဆာဆာတစ်ယောက်ဆရာဝန်ဘွဲ့ကိုဂုဏ်ထူးနဲ့ရခဲ့ပါတယ်။Prospect Burma ရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ဆာဆာရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ပေါ့..
တစ်ရက်ကိုလူနာလေးရာကျော်ကြည့်ရတဲ့ဒေါက်တာဆာဆာလည်းနှစ်ပတ်လောက်နေတော့အရမ်းပင်ပန်းပြီးသူကိုယ်တိုင်လူနာပြန်ဖြစ်မယ့်အခြေအနေဖြစ်လာတော့တယ်... ဒီလိုရေရှည်မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီး... ရွာတိုင်းမှာအခြေခံကျန်းမာရေးအသိရှိသူတွေမွေးထုတ်ပေးမှပါဆိုပြီး ... တစ်ရွာကိုလူ၂ယောက်နှုန်းနဲ့ရွာပေါင်း၁၄၇ရွာကအခြေခံကျန်းမာရေးလုပ်သားလုပ်မယ့်သူတွေကိုသင်တန်းပေးတဲ့လုပ်ငန်းကို၂၀၀၉နိုဝင်ဘာမှစတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့သင်ရိုးက "Where there is no Doctor" (ဆရာဝန်မရှိတဲ့နေရာမှာ) ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပြီးသင်တန်းသားတွေကိုသာမိုမီတာတစ်ချောင်းစီ၊နားကြပ်တစ်ခုနဲ့သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းကိရိယာတစ်ခုစီကိုပါသင်တန်းပြီးတဲ့အခါထည့်ပေးလိုက်တယ်..။Prospect Burma နဲ့အလှူရှင်တွေရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ပေါ့... အဲဒီသင်တန်းကဆင်းတဲ့အခြေခံလုပ်သား၃၀၀ကျော်ကချင်းပြည်နယ်ပြည်သူတစ်သိန်းကျော်လောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကာမိစေတာပေါ့..
後に、そのプロジェクトは、ドクター・ササがHealth and Hopeという名前でファウンデーションを立ち上げた。チャールズ皇太子が顧問として名を連ねている。このファウンデーションは、チン州から100人以上を外国に留学に送り出した。礼儀正しく頑張る優等生たちの運命に光を与えたのだ。
နောက်ပိုင်းအဲဒီပရောဂျက်နာမည်ကိုHealth and Hope(ကျန်းမာခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်း) နာမည်နဲ့ဒေါက်တာဆာဆာကဖောင်ဒေးရှင်းထောင်လိုက်တယ်... အဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းမှာချာလ်းမင်းသားကနာယကပေါ့..
(လူတော်တစ်ယောက်inspiration ယူစရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ရှယ်ပေးပါ... တစ်ခြားပါတီကိုနှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းမျိုးတွေနဲ့မရှယ်ပါနဲ့ခင်ဗျာ)
Crrd; Zaw Win
Credit - Ko Mg Oo
伊部厚子 (木曜日, 03 6月 2021 10:35)
二ノ坂　保喜 (土曜日, 05 6月 2021 11:04)
SHIBASAKI, yoshio (日曜日, 06 6月 2021 14:26)
I'll support and pray for citizens in Myanmer from the bottom of my hart.
Please keep embracing 'hope' and never give up.
三好和恵 (日曜日, 06 6月 2021 14:41)
吉永祥三 (日曜日, 06 6月 2021 17:34)
丸山 牧夫 (水曜日, 16 6月 2021 21:15)
宮川和彦 (火曜日, 03 8月 2021 09:18)